Ny grills ivelany vita amin'ny vy tsy misy dikany dia iharan'ny fepetra henjana. Anisan'izany ny toetr'andro, ny hafanana, ny fanadiovana simika sy ny ratra, ankoatry ny hafa, izay mahatonga azy ireo ho mora voan'ny harafesina sy pentina. Na dia ny anaran'ny fitaovana s...
Ny fivoriana no fomba tsara indrindra hifandraisana sy hifandraisana amin'ny namana; ny barbecue amin'ny fiaraha-mivory dia afaka mampiroborobo ny fisakaizana eo amin'ny tsirairay. Fa ny fanomanana barbecue mandreraka dia fiomanana mandreraka tokoa raha tsy misy ny fanampian'ny havana sy namana. Ahoana ny...
Arahabaina ny Chuliuxiang Catering Equipment Co., Ltd. noho ny fahombiazany tanteraka tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny CCH2021 faha-10 Internetional franchine exbibition Show. Raha mahatratra ny fifanarahana fiaraha-miasa na fikasana amin'ny mpanjifa maro,...
11 Zavatra tokony hatao amin'ny Halloween raha tsy mandeha amin'ny hafetsena na fitsaboana ianao
Tsy mikasa ny handeha isan-trano ve ianao? Ireto misy hetsika vitsivitsy momba ny Halloween azonao atao ao an-trano (na eo akaiky eo), miaraka amin'ny ankizy na irery. Zavatra mahafinaritra atao amin'ny Halloween ao an-trano: 1. Haingo Cookies na Cupcakes Tsy Halloween tsy misy zava-mamy be dia be, sa tsy izany? Angony ny zanakao,...
Rahoviana ny saribao no vonona hangotraka?
Satria lasa fotsy ny saribao, tsy midika izany fa tonga ny fotoana mahandro. Mametraka burgers mahazo sy steak eo amin'ny makarakara raha vao ny lavenona saribao handoro ny ivelan'ny hena. Rehefa mitranga izany dia mila mamela ela kokoa ny hena eo amin'ny grill ianao mba hahazoana antoka ...
4 + 1 fatana entona ivelany
Ny CLUX 4-Burner Gas Grill miaraka amin'ny Side Burner no grille tonga lafatra ho an'ireo vao manomboka sy ireo mpankafy grilling. Miaraka amin'ny toerana mahandro sakafo ampy ho an'ny vondrona madinika sy salantsalany, fandoroana lafaoro azo ampiasaina hanendasany, mampangotraka sy mafana, sarony vy tsy misy tady mavesatra, ary...
CCH2021 THE 10th international franchise exbibition The China Franchise Exhibition dia nankatoavin'ny Minisiteran'ny Varotra Shina ary naorina tao Beijing tamin'ny 1999. Fampirantiana franchise matihanina lehibe iray ampiantranoin'ny China Chain Store & Franchise ...
Shenzhou 13 dia natomboka tamim-pahombiazana ary nahomby tamin'ny fiantsonana!
Araka ny filazan'ny China Manned Space Engineering Office, amin'ny 0:23 amin'ny 16 Oktobra 2021 amin'ny fotoanan'i Beijing dia ho marina amin'ny fotoana voatondro ao amin'ny Jiuquan Satellite Launch Center ny roketa mpitatitra Long March 2 F Yao 13 mitondra ny sambon-danitra misy olona Shenzhou 13. Taorian'ny fandrehetana sy fandefasana, manodidina ny...
Inona no azonao andrahoina ao anaty lafaoro pizza entona ankoatra ny pizza?
Manontany tena ve ianao raha tena mendrika ny hampiasa vola amin'ny lafaoro pizza raha ny pizza hany azonao mahandro - na izany aza, azo antoka fa na dia ireo mpankafy pizza lehibe indrindra eto amintsika aza dia tsy afaka mihinana azy isan'andro! Eny, fantatrao ve fa vao fiandohan'ny zavatra azonao atao amin'ny lafaoro pizza misy gazy? Misy safidy maro samihafa...
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny barbecue sinoa sy ny barbecue vahiny
Ankoatra ny maha malaza eto amintsika dia tena malaza any ivelany ihany koa ny fanaovana barbecue, saingy iaraha-mahalala fa tena tsy mitovy amin’ny firenena ny fanaovana barbecue, ka andeha hojerentsika ny any Chine. Inona no maha samy hafa ny barbecue sy ny barbeque vahiny...
Momba ny fonosana ny giro
Na dia toa zavatra matanjaka entina entina aza ny grills, dia mbola mila amboarina tsara izy ireo mba hahazoana antoka fa tsy simban'ny ranon-javatra na ny fikirakirana henjana. Mamelà ahy hanazava aminao ny fonosana samihafa amin'ny grills barbecue maromaro izay nataon'ny orinasa clux vao haingana ...
Ry namako rehetra, ny 1 oct dia manana 3 andro tsy fiasana isika. Mankalaza ny Fetim-pirenen'i Shina. Inona no atao hoe Fetim-pirenen'i Shina ary ahoana no fitandremana izany? Ny Fetim-pirenen'i Shina, antsoina hoe 国庆节 (Guóqìng jié) amin'ny teny sinoa, dia ankalazaina amin'ny feo avo isan-taona amin'ny 1 Oktobra ho andro tsy fiasana. ...